‘वेलायतमा धेरैं माया पाए’ – News Portal of Global Nepali
12:51 AM | 5:36 AM
‘वेलायतमा धेरैं माया पाए’
31st May 2017 मा प्रकाशित
उनलाई सानैदेखि समाजसेवामा रुचि थियो, स्कुले जीवनमा थुपै विद्याको अनुभव बटुलेकी सुजाता काफ्लेले नाटक र टेलिसिरियलमा समेत अभिनय गरेकी छन् । सन् २००९ मा बेलायत छिरेकी काफ्ले अहिले व्यस्त गायिका मध्ये पर्छिन् । हरेक साता बेलायतमा हुने सामाजिक संघसंस्थाको कार्यक्रममा भ्याइ नभ्याई छ उनलाई । हालसालै ऐसेलु नामको म्यूजिक सार्वजानिक गरेको पछि उनको चर्चाले व्यापकता पायो । उनी दोहोरी गीत गाउनसमेत पोख्त मानिन्छन् । उनले लन्डन आएका गायक बद्री पंगिनी र राजु ढकाललाई दोहोरी गायनमा टक्कर दिएकी थिइन् । दोलखा स्थायी घर भएकी तिनै गायिका काफ्लेसँग नेपाल ब्रिटेन डट कमले लन्डनमा गरेको कुराकानी–
० बेलायत कसरी आइपुगियो ?
– मेरो श्रीमानले अध्ययनका लागि बेलायत आउने निर्णय गर्नु भयो । उहाँको अध्ययनलाई सहयोग पुगोस् भनेर म पनि साथ दिन सन् २००९ मा बेलायत आएकी हुँ ।
– मेरो प्रेम विवाह हो, साथीहरुसँग भेटघाट गर्ने क्रममा उहाँसँग पहिलो भेट भएको थियो । पहिलो दिनमै हामीहरु कपन घुम्न गएका थियो । त्यसपछि पारिवारिक सल्लाहमा हामी विवाह बन्धनमा बाँधियौं ।
० के सपना बोकेर लन्डन आउनु भएको थियो ?
– खासै ठूलो सपना थिएन । परिवारको उज्जल भविष्यका लागि आएकी हुँ । जुन उद्देश्य लिएर आएका हौं, त्यो विस्तारै पूरा हुदैछ, खुशी छु ।
० पहिलो दिन लण्डन आइपुग्ला कस्तो लाग्यो ?
– यहाँका घर देख्दा नराम्रो लाग्यो । यस्ता झुपडी भएको देशमा आएछु भनेर फिल भयो । विस्तारै रमाउन थालेँ ।
० बेलायत आएपछि दिनचर्चा कसरी सुरु भए ?
– काम पाउन निकै मुस्किल थियो, दुःख गरेर नेपाली रेष्टुरेन्टमा काम पाएँ । तर काम दिने नेपालीले खान बस्न दिन्छु तलव दिन्न भनेपछि निकै दुःख लाग्यो । काम गरेको पैसा दिन्न भन्न सक्ने नेपालीहरु बेलायतमा साहुजी बनेर हिडेको देख्दा अचम्म लाग्छ । अहिले मेरो श्रीमानको पनि राम्रो जागिर छ म आफै नसिङ पढ्दैछु ।
० विदेशमा बसेर यस्तो व्यस्ततामा कसरी गीतसंगीतमा लाग्नुभयो ?
– म सानैदेखि गीत गाउँथे, सन् २००२ तिर देलाखाको विद्यालयस्तरीय गीत प्रतियोगितमा प्रथम भएकी थिएँ । सानैदेखि रुचि थियो । त्यो प्रतियोगितमा म आफैले लेखेको गीत गाएकी थिएँ । जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाए भनेजस्तै भयो लन्डनमा संगीतका गुरु आशिस राज र कोरियोग्राफर सरु गुरुङलाई भेटे । उहाँहरुको प्रेरणले आफ्नो गीति यात्रालाई शोखको रुपमा अगाडि बढाउँदै छु ।
० कस्तो लाग्छ स्कुले जीवन सम्झिदा ?
– मलाई सानैदेखि कलाक्षेत्रमा रुचि थियो । स्कुलदेखि नै रेडियो नाटक खेल्ले, विभिन्न टेलिसिरियलमा खेल्ने गर्थे । स्कुल पढ्दा पढ्दै राधविरागम, अब उज्यालोतिर टेलिसिरियलमा अभियन गरे । नेपालका कलाकारहरु मेलिना मानन्धर, गौरी मल्ल, शिव श्रेष्ठसँग काम गर्ने अवसर पाएकी थिए । ती दिनहरु सम्झिदाँ निकै खुशी लाग्छ । नोस्टालजियामा रमाउनु ठीक हो, तर ती दिन कहाँ फर्केर आउँछन् ?
० हालसालै सार्वजानिक भएको म्युजिक भिडियो ऐसेलुको कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भयो ?
– मैले सोचभन्दा धेरै राम्रो प्रतिक्र्रिया पाएकी छु । एक दिनमै ११ हजारभन्दा बढीले यूट्युवमा हेरेका थिए । त्यो मेरो लागि निकै खुशीको दिन थियो । ऐसेलुले नै मलाई बेलायतका नेपाली बीच चिनाएको छ । सबैले कार्यक्रममा बोलाउनु हुन्छ, धेरैको माया पाएको छु । निकै ठूलो हौसला मिलेको छ, अब जुलाईपछि अर्को म्युजिक भिडियो ल्याउने तयारीमा छु । विस्तार एल्वम पनि निकाल्छु ।
० कहिलेसम्म आइपुग्छ दोस्रो म्युजिक भिडियो ?
– दोस्रो म्युजिक भिडियो नेपालमै गएर रेकडिङ गर्ने विचार गरेकी छु । केही महिनापछि नेपाल जान्छु, त्यही गीत रेकर्ड गरेर आएपछि बेलायतमा भिडियो सुटिङ गर्ने योजना छ ।
० हेरेक साता बेलायतका बिभिन्न कार्यक्रममा गीत गाउन जानु हुन्छ । पारिश्रमिक पनि दिन्छन् ?
– पारिश्रमिकभन्दा पनि मेरा लागि दर्शकको माया ठूलो कुरा हो । दर्शकको माया कमाएकी छु, पैसा भन्ने कुरा बेलायतको नेपाली समाजमा त्यस्तै हो कोहीले जानेर दिन्छन् कसैले नबुझे जस्तो गर्छन् । पारिश्रामिको आश गरेकी छैन्, म पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट छु ।
० गीत संगीतका अतिरिक्त के छन् भावी योजना ?
– भविष्यमा नेपालमै बस्ने योजनामा छ । नेपालमै सानो व्यवसाय सुरु गर्छु होला । सबै कुराले साथ दियो भने सामाजिक काम गर्दै गीतसंगीत र अभिनयलाई पनि एकै साथ अगाडि बढाउँछु ।
० फिल्ममा खेल्ने अफर पनि आएको छ की ?
– थ्रुपै टेलिसिरियलमा खेल्न अफर आएको छ । कुनै दिन ठूलै पर्दाको चलचित्रमा पनि अभिनय गर्छु भन्ने मनमा लागेको छ ।